कर्मचारी साचय कोष र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीबीच सम्झौता / २ सय ७० मेगावाटका आयोजनासँग ऋण सम्झौता | Business and Economy of Nepal
कर्मचारी साचय कोष र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीबीच सम्झौता / २ सय ७० मेगावाटका आयोजनासँग ऋण सम्झौता
Posted on December 9, 2011 by Babukrishna	नेपाल समाचारपत्र
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले २ सय ७० दशमलव ३ मेगावाट बराबरका ४ वटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न कर्मचारी साचय कोषसँग बिहीबार ऋणसम्झौता गरेको छ।
ऋणसम्झौता गरिएका आयोजनामा १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी ४२ दशमलव ५ मेगावाटको सान्जेन र १४ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सान्जेन रहेका छन्। यी आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजबाहेकको कुल लागत ३३ अर्ब २१ करोड ७ लाख रुपियाँ रहेको छ।
कुल लागतको ५० प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ६० करोड ५३ लाख ३५ हजार रुपियाँ कोषले लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो। बिहीबार भएको सम्झौतामा कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्धक संचालक कुलमान घिसिङ र कोषका तर्फबाट प्रशासक डा. रमेशकुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले आयोजनाको निर्माण तत्काल शुरु गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी तथा राजनीतिक सहयोग रहने मन्त्री बोगटीले बताउनुभयो। बढ्दै गएको लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि पनि आयोजना तोकिएको समयमै पूरा गर्नुपर्छ मन्त्री बोगटीले भन्नुभयो। यसै गरी ऊर्जा सचिव बालानन्द पौडेलले यी आयोजना तोकिएको लागत र समयमै पूरा गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो।
कोषले पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बढाइरहेको भन्दै उसको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सचिव पौडेलले बताउनुभयो। यो प्रावधानलाई जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउन आवश्यक छ। -उहाँले भन्नुभयो। सरकारलाई आयोजनाको हकमा सीमा हटाउन सचिव पौडेलले आग्रह गर्नुभयो।
नेपालको विकासका लागि जलविद्युत् विकासको विकल्प नरहेको भन्दै कोषका प्रशासक डा। रामेशकुमार भट्टराईले कोषले जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको दर बढाउँदै जाने बताउनुभयो। प्रशासक भट्टराईले भन्नुभयो- चर्को आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि पनि जलविद्युत्को विकास जरुरी छ।
ऋणसम्झौताअनुसार प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर हाललाई वार्षिक १२ दशमलव ५० प्रतिशत कायम गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। ब्याजदर वार्षिकरुपमा पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। कोषले आयोजनाहरुको निर्माणलाई अघि बढाउन तुरुन्त ऋण प्रवाह गर्ने तर कम्पनी धितो राखेपछि मूल्यांकनको ७० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २४ करोड रुपियाँ दिइने कोषका प्रशासक डा. भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
धितो पास भइसकेपछि पनि संचालकहरुको ५० प्रतिशत दायित्व जम्मा भइसकेपछि किस्ताको रुपमा ऋण प्रवाह गर्ने कोषले जानकारी दिएको छ। ऋणसम्झौता भए पनि कम्पनी नै धितो राख्ने सर्त भएकाले रकम निकासा थप झन्झटिलो हुने भएको छ।
रसुवागढीबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख ७५ किलोवाट मध्यभोटेकोसीबाट ५४ करोड २३ किलोवाट सान्जेनबाट २४ करोड १८ लाख र माथिल्लो सान्जेनबाट ८ करोड २४ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। यी आयोजनामा कम्पनीको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। ४९ प्रतिशतमध्ये १९ प्रतिशत कोषका संचयकर्ताहरुले सेयर लगानी गर्नेछन्। चारवटै आयोजनाले २०७४ सालको पुससम्म व्यापारिक उत्पादन शुरु गरिसक्नुपर्नेछ।
Filed under: Share Market Tagged: | 16.50 Billion loan investment is by EPF @12.5 loan interest, 33.21 billion cost estimate of four hydropower peoject developed by Chllime Hydropower, Chilime and Employment Provident Fund loan agreement, Chilime Hydropower co. Ltd, Chilime Producing 270.4 MW more electricity, Middle Bhotekoshi Hydwopower of 102 MW, Rasuwagadhi Hydropower of 111 MW, Sangen Hydropower of 42.5 MW, Upper Sangen of 14.8 MW	« जलविद्युत आयोजनालाई १० प्रतिशतमा ऋण लघु जलविद्युत आयोजनालाई दिएको ऋण विपन्न वर्ग कर्जा »